उद्योग र श्रमिकका समस्या समाधानमा उद्योग संगठन र ट्रेड युनियन एकजुट
विराटनगर (अस) । उद्योगी र ट्रेड युनियन नेतृत्वबीच भएको छलफलमा आपसमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । उद्योग संगठन, मोरङ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका प्रतिनिधिहरू उद्योग व्यवस्थापन र श्रमिकका हकहितसम्बन्धी समस्याको उपाय खोज्नतर्फ अघि...
कवाडी मजदूर व्यवसायी संघको वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल कवाडी मजदूर व्यवसायी संघको २९ औं वार्षिक साधारणसभा शनिवार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभामा संघका सचिव शुक्रबहादुर लामाले संघको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गरे ।
संघका सचिव लामाले कवाडी व्यवसायीको हकहित र अध...
सुर्खेतमा कपडा बैंक खुल्यो
सुर्खेत (अस) । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढी चोकमा शनिवारदेखि कपडा बैंक सञ्चालनमा आएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख (एसपी) वसन्त रजौरेले उक्त कपडा बैंकको उद्घाटन गरेका हुन् ।
वाईवाई ग्लोकल टीन हिरोका अन्तिम ६ प्रतिस्पर्धी घोषणा
काठमाडौं (अस) । वाईवाई ग्लोकल टीन हिरो २०१९ का लागि अन्तिम छनोटमा परेका ६ प्रतिस्पर्धीको नाम घोषणा भएको छ । छनोटमा जनकपुरकी विधि मण्डल, पोखराका विक्रम पराजुली, रूपन्देहीका लभ पन्थी, मकवानपुरका रचिन कलाखेती, मोरङका समीर फुयाल र काठमाडौंकी सुप्रिया महर्जन सापकोटा परेका छन् ।
इन्डोनेसियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस काठमाडौंमा
काठमाडौं (अस) । गणतन्त्र इन्डोनेशियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस काठमाडौंमा शनिवार एक समारोहबीच मनाइएको छ । स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपालका लागि इन्डोनेशियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत चन्द्रप्रसाद ढकालले वाणिज्यदूतको कार्यालयमा इन्डोनेशियाको झण्डोत्तलन गरेका थिए ।
इन्टरस्कूल फ्रेन्डशिप क्विज कन्टेस्ट २०७६ सम्पन्न
काठमाडौं (अस) । अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूल अनामनगर काठमाडौंले गरेको ओपीएस इन्टरस्कूल फ्रेन्डशिप क्विज कन्टेस्ट २०७६ को विजेता घोषणा तथा पुरस्कार वितरण सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा बृहस्पति विद्या सदनले प्रथम हुँदै रू. २० हजार, ह्विज किड्स माविले दोस्रो हुँदै रू. १० हजार...
भीमदत्त नगरपालिकामा भ्रमण वर्षको तयारी
महेन्द्रनगर (अस) । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सफल बनाउन प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै प्रचारप्रसारमा जोड दिइएको नगरपालिकाको भनाइ छ ।
मोरङ व्यापार संघले थलाह ब्यारेकमा गर्‍यो वृक्षरोपण
विराटनगर (अस) । मोरङ व्यापार संघले १० हजार बोट बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने अभियानको शुभारम्भ गरेको छ । पर्यावरण प्रबद्र्धनका लागि वृक्षरोपणको आवश्यकतालाई महशुस गरी शुरू गरिएको अभियान अन्तर्गत शुक्रवार सूर्यदल गण, थलाह व्यारेक, कटहरीमा एक हजार फलफूल तथा अन्य बोट बिरुवा...
सुनसरीमा महिला उद्यमी मेला हुँदै
धरान (अस) । सुनसरीका उद्यमी महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण गर्दै उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भदौ ५ देखि ७ गतेसम्म महिला उद्यमी मेला २०७६ हुने भएको छ ।
महिला सञ्जाल धरानको आयोजनामा धरानको छाता चोकनजीकै रहेको सोमबारे...
तुलसीपुर बजार शनिवार पनि खुल्ने
दाङ (अस) । दाङको तुलसीपुर बजार अबदेखि शनिवार पनि खुल्ने भएको छ । अन्य समयमा शनिवारका दिन बजार बन्द गर्दै आएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आगामी छठसम्म शनिवार पनि आफ्नो व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्न सबै व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ । नजिकिँदै गरेका तीज, दशैं, तिहार लगायत चाडपर्...